Umthetho OWENGEZIWE (UMthetho Wokubuyiselwa Kwamathuba kanye nokuqothulwa kweMarijuana) kuCongress - Ummeli weCannabis - uTom Howard - Izomthetho Zomthetho weMarijuana namabhizinisi weHemp
The Ikomidi Labezomthetho BeziNdlu limemezele ukusekela kwalo ukuze insangu ibe semthethweni kwizinga le-federal. Ngokukhangela kokusemthethweni, sinomthethosivivinywa ovunyiwe ngoLwesithathu, Novemba 20, kanti lo mthethosivivinywa ususa insangu ku-Sheduli 1 yoMthetho Okulawulwayo Wezinto. Manje sinakho okusha I-Marijuana Ithuba Ukuvuselelwa Kokunwebeka Nokunwebeka (OKWENGEZIWE) Isenzo esidlule ngomhla ka-24-10 kwinkulumompikiswano yakamuva.
Kuzoba Yini Imiphumela Yesenzo esengeziwe?
Umthetho lo unethuba elikhulu lokuvunywa kwiNdlu ephelele uma amaDemocrats enqoba impi yokulwa namaRepublican lapho uMholi Omkhulu uMitch McConnell ephikisana kakhulu nokusemthethweni kwensangu. Uma umthetho uqala ukusebenza ngokugcwele, sizoba nesimo lapho umthetho uzovikela khona abantu ngamacala aphansi insangu. Amarekhodi abo obugebengu azosulwa bese kuthi amacala abo azothunyelwa kobunye ubukhosi.
Lo mthethosivivinywa uhlanganiswe ukukhipha ubugqila kanye nokuchithwa kwe-cannabis ngezindlela eziningi ezazikade zisekelwa iMpi Yezidakamizwa. Ezinye izehlakalo zokwe-cannabis zizothunyelwa ukuze ziqedwe futhi ezinye izinhloso zenkokhelo zizoba nomthelela ohlelweni oluphelele lwamandla.
Njengengxenye yesenzo sokususwa ohlelweni lwezinto ezilawulwayo, insangu ne-tetrahydrocannabinols ngeke isaba yingxenye yezinto ezilawulwayo. Ukususwa ohlelweni kuzokwenzeka kungadluli izinsuku ezingama-180 ngemuva kosuku lokuqalwa kwalomthetho.
Indlela Lo Mthethosivivinywa Ozobathinta Ngayo Amabhizinisi E-Cannabis
Ukuqaliswa okwengeziwe kwalomthethosivivinywa kuzokhetha izigaba eziyingxenye yebhizinisi le-cannabis. I-Bureau of Lab Statistics izohlanganisa, igcine, futhi yenze idatha yomphakathi emidwebeni yabantu abahlobene nabantu abangabanikazi bebhizinisi embonini ye-cannabis. Ngasikhathi sinye, i-Bureau izofaka abantu abathile abaqashwe embonini ye-cannabis.
Idatha ephelele yokwanda kwabantu izofaka:
• Isimo sokukhubazeka
• Isimo somndeni nesomshado
• Ukubhaliswa kwesikole
• Isimo seVeteran
Ngokuqoqa imininingwane eshiwo, izinhlaka zomthetho ezisemthethweni zizokwazi ukuthi iziphi izingxenye kuMthetho ezizokuba nomthelela omuhle kakhulu ebhizinisini le-cannabis. Ukunikeza imininingwane enjalo kuzonquma ukuthi imitheshwana esemthethweni ingasebenza kuphi futhi kuphi.
Ngabe Umthetho Uyayiqeda Kanjani Impi Yezidakamizwa?
I-War on Izidakamizwa ngumkhankaso kazwelonke oholwa uhulumeni wobumbano wase-US. Kubandakanya ukwenqatshelwa kwezidakamizwa nokungenela kwezempi okuhlose ukunciphisa imisebenzi engekho emthethweni eyingxenye yokuhweba ngezidakamizwa e-USA. URichard Nixon, owayengumongameli, wamemezela lesi sikhathi ngonyaka we-1971 futhi wamemezela iqoqo lenqubomgomo yezidakamizwa eyenzelwe ukunciphisa ukukhiqizwa, ukusatshalaliswa kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Njengengxenye yoMthetho omusha OKWENGEZIWE, abantu abathintwa yi-War on Drug uzonikezwa imali yokuphatha izinsiza zokwelapha ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhlelo Olusemthethweni Lokuxhaswa Kwezimali Zomphakathi luzohlinzeka ngamabhizinisi afanele ngezimali ezidingekayo. Ngaphansi kwegama elithi 'ukwelashwa kokusetshenziswa kwezidakamizwa', sibona irejimeni esekwe ebufakazini, eqondiswe kahle futhi ehlelekile esiza iziguli ezinenkinga yokusebenzisa izidakamizwa. Ukuxoshwa kanye nokululama kuzofaka ukuhlolwa okuphelele, ukubhekwa, kanye nokuqashwa kwezokwelapha.
Igama elithi 'ibhizinisi elifanele' lisho inhlangano engenzi inzuzo eyimeleli yomphakathi noma ingxenye ebalulekile yomphakathi lapho izinsizakalo zitholakala kubantu abathintwe yiMpi Yezidakamizwa. Esigabeni 5 soMthetho OKWENGEZIWE ka-2019, singathola imigomo elawula amalungelo abantu abasebenzisa izinsiza zokwelapha.
UMthetho OWENGEZIWE Ungakuguqula Kanjani UkuPhila Kwethu?
Ezimweni eziningi, impi ngezidakamizwa yayisuselwa ekuthini izidakamizwa zigebengu. Kodwa-ke, ngomthetho omusha OKWENGEZIWE, isimo sehlukile. Sinamalungelo angaphezu kweyodwa okuthi izimiso ezisemthethweni zizoshintsha indlela esibona ngayo insangu nemikhiqizo ye-cannabis. Impi Yezidakamizwa yayiyingxenye yomlando eyaba nemiphumela eminingi emphakathini wethu. Manje, sinomthetho OKWENGEZIWE ongaguqula ngokuphelele imibono yethu kanye nemikhuba yethu uma kukhiqizwa kanye nokusetshenziswa kwezinto ezinengqondo.
Njengengxenye yoMthetho OYENGEZIWE, kungenzeka ukufuna amalungelo abantu abaningi abanerekhodi lobugebengu ngokusetshenziswa kwezidakamizwa nokusatshalaliswa. Kushiywe ukuthi babone ukuthi bangaki abantu abazothola umbono ohlukile enkantolo uma kukhulunywa ngamacala aphansi insangu. Uma lokhu kwenzeka, abantu abaningi bazokwazi ukuthola inkululeko futhi basebenzise irekhodi lobugebengu njengengxenye yokuqaliswa koMthetho omusha OKWENGEZIWE.
Thola ukufinyelela kokuqukethwe okungafani nathi
Bhalisa manje ukuze ubhalisele okunikezwayo ukukunikeza ukufinyelela olwazini lomkhakha we-cannabis. Sitshele igama lakho lekheli nekheli le-imeyili futhi uzoqala ukuthola okunikezwayo mayelana nokuthi singakusiza kanjani ekutholeni imboni ye-cannabis namuhla.